Imandarmedia.com.np: प्रधानमन्त्री देउवाले भने - केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैदिन गरौं, के गर्ला निर्वाचन आयोग ?
Main News, Political » प्रधानमन्त्री देउवाले भने - केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैदिन गरौं, के गर्ला निर्वाचन आयोग ?
प्रधानमन्त्री देउवाले भने - केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैदिन गरौं, के गर्ला निर्वाचन आयोग ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरु सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनताको मत बदर नहुने गरी मतदान प्रक्रियामा सुधार गर्न आयोगलाई आग्रह गरे । संवैधानिक व्यवस्थानुरुप सरकार आगामी माघ ७ गतेभित्रै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सोअनुसार तयारी तत्काल थाल्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।